Akụkọ - Ego ole ka nnukwu akpa na -ebu?
A na -eji nnukwu akpa, makwaara dị ka akpa jumbo, nnukwu akpa, nnukwu akpa, ruo ọtụtụ iri afọ. A na -eji ha n'ọtụtụ ụlọ ọrụ wee weta uru dị egwu.
Mgbe ndị mmadụ na -ahọrọ nnukwu akpa, ha ga -achọpụta etu ha ga -esi gbakọọ ike akpa ahụ imezu ihe ha chọrọ. Ikike nnukwu akpa na -egosi ole nnukwu ihe ọ nwere ike ibu. N'iji nnukwu akpa na-ebufe ma na-echekwa ájá, ihe, nri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ị kwesịrị ịma ike nke akpa ndị na-egosi olu ihe nwere ike dabara. Dị ka ọ na-adịkarị, enwere ike ịtụle akpa akpa cubic 1 dị ka ọkọlọtọ. akpa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, olu nke nnukwu akpa na -eso usoro bụ isi nke olu na -aha ka ogologo oge n'obosara n'ogologo. N'okpuru usoro a, nnukwu akpa otu mita 1 ugboro 1 mita nwere ike ijide ihe dị ka otu cubic mita. Dị ka anyị na -ahụ, akpa nwere obere ma ọ bụ ibu nwere ike ijide ngwaahịa dị obere ma ọ bụ karịa.
Zọ kachasị mma iji hazie akụkụ nke nnukwu akpa bụ ịhazigharị ịdị elu, na-abịa n'ogologo 0.9meter n'obosara 0.9meter, nke na-enye ohere ka akpa jumbo na-adịghị mma dabara na pallets ọkọlọtọ. Itinye nha nke ogologo na obosara ga -eme ka nnukwu akpa buru oke ibu maka ọtụtụ pallets, agbanyeghị, ịgbakwunye elu nwere ike inye aka nwekwuo ike nke akpa mgbe ị na -edobe akpa dị mma maka ụlọ ahịa pallet na njem.
Iji jiri nnukwu akpa maka azụmaahịa gị, ị ga -aghọta SWL (ibu ọrụ nchekwa), nke pụtara ịmata ike ikike nke ihe nwere ike dabara na nnukwu akpa. FIBC dị iche iche nwere oke ibu dị iche iche yana oke nchekwa dị mma. Kpọtụrụ ndị otu ọrụ aka ọrụ anyị ka ha nwekwuo mkparịta ụka maka nnukwu akpa ịchọrọ.
Akpa Jumbo Fibc, Akụ Fibc Akụkụ, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Pp akpa Fibc, Nnukwu akpa Fibc, Ụdị akpa Fibc,